सरकार जनताका बाचा, कहिले पूरा गर्ने ? | Nepali Outlook
सरकार जनताका बाचा, कहिले पूरा गर्ने ? मास्टर थापा भन्छन् : नेपाल विश्वका हिन्दुकाे, आस्थाको केन्द्र हो । सभामुख महराले ८३ हजारको तेल झ्वाम पारे, राेल्पा पुग्दा गाडीले धेरै तेल खायाे यस्तो बन्ने भयाे, नारायणगढ-बुटबल सडक मुम्बईमा सुख-दु:खका सारथी, नेपाली कल्लु मामा !
Published On: February 11, 2019 || 2075 माघ 28 सोमबार , at 11:41 AM
पहिलो प्रश्न : जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनता संग गरेका बाचा पूरा गर्ने कि नगर्ने ? जनाता संग भाेट माग्दै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले अाफ्नाे घाेषणा पत्रमा ब‌ृद्धभत्ता पाँच हजार, एक घर – एक राेजगारकाे नाराले जनतालाई भ्रममा परेर चुनाब जिते।
संसदमा पुगेपछि जनता संग गरेका प्रतिबद्धता कुल्चदै अाफ्नाे ब्यक्तिगत स्वार्थमा झुलिरहेका छन। तलब भत्ता र बिकास निर्माणका कार्यमा कमिसन र दलाली गर्दैमा जनप्रतिनिधिहरुका दिन गईरहेका छन्। जनताले अब देशमा केही परिबर्तन हुन्छ कि भनेर, कम्युनिस्टकाे झुटाे अास्वासनमा परि अाफ्नाे अमुल्य भाेट दिए र अहिले उनीहरुका गतिविधिले पछुताउनु पर्ने अबस्था अायाे।
कम्युनिस्ट पार्टीको घाेषणा पत्रमा लेखिका नाराहरु : नारामै सिमित भए र छन। सर्वहारा बर्गकाे नाममा हतियार उठाएका तत्कालीन माअाेबादीहरुका रुप पनि अनेक देखिए। सहिद परिवारकाे अपमान गर्दै निहित स्वार्थका लागि एमाले संग हात मिलाएकाे दृश्य पनि देखियो।
एमाले : पाटि नै हाेईन भन्ने प्रचण्ड अाजकाल, अाफ्ना कतिपय एजेन्डालाई लात मार्दै एमाले संग बिलिय भए। अाफुलाई क्रन्तिकारी यूग पुरुष सम्झिने कमरेड प्रचण्ड अाफै नेकपामा कहिले रुन्छन् त, कहिले हाँस्छन्। केपि अाेली : प्रचण्डलाई अातङ्कारी भन्दै उनकाे नाम पनि सुन्न नचाहाने नेता, उनै संग हातेमालाे गर्दै एउटै टेबुलमा मार्सि चामलकाे भात खान पुगे।
नेता ज्यू ! तपाईं कहिले सम्म जनतालाई मूर्ख बनाउछाैँ। अब जनताले बुझिसकेका छन, याे कम्युनिस्टकाे सरकारले केहि पनि गर्दैन। जनताले तपाइलाई के भनेर अाफ्नाे अमुल्य भाेट दिएर
जिताएका हुन याे बिषयमा पनि ध्यान दिने कि? अाफ्ना मतदाता संग गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि र जनतालाई न्याय दिन नसक्ने, याे सरकारकाे केही पनि अाशा गर्ने ठाउँ छैन।
दुई तिहाई सरकार थिएन, कसैले कसैलाई काम गर्न दिएन भने शब्द थियाे। अाज त्याे शब्द मेटिएकाे छ।सरकार संग दुई तिहाई छ तर काम किन पनि जनताका अाधारभुत अाबस्ताका काम पनि किन गर्न सक्दैनाै। सरकार संग दुई तिहाई हुदा पनि सिन्काे पनि नभाँच्ने ।
चिया पसल देखि रेस्टुरेन्ट, सडक देखि सदन सम्म सबैले सरकारकाे अालाेचना गरिरहेका छन्। तरपनि सुन्दैन सरकार।
नेपाली जनताले सरकारकाे गतिबिधि राम्राेसंग बुझि सकेका छन। याे देशमा नेपाली काँग्रेस बाहेक अरु कुनै पनि पार्टीले देशमा शान्ति, समृद्धि र बिकास गर्नै सक्दैन भन्ने कुरामा। कमरेड प्रचण्डकाे दस बर्षमा स्वीजरल्याण्ड बनाउने सपना र कमरेड के.पि. अाेलीकाे नयाँ यूग पनि राम्ररी देखियाे। अाउने चुनावमा कम्युनिस्टलाई जनताले पनि, गतिलाे प्रहार गर्नेछन्।
बिश्वकर्मा नेपाली जनसम्पर्क समिति (भारत) खारघर पनवल (न्यु मुम्बई) शाखा सचिव हुन्। लेखकका निजी बिचार हुन्।
कम्युनिस्ट सरकारकाे दम्भ कहिले सम्म ?
1 सरकार जनताका बाचा, कहिले पूरा गर्ने ?
2 मास्टर थापा भन्छन् : नेपाल विश्वका हिन्दुकाे, आस्थाको केन्द्र हो ।
3 सभामुख महराले ८३ हजारको तेल झ्वाम पारे, राेल्पा पुग्दा गाडीले धेरै तेल खायाे
4 यस्तो बन्ने भयाे, नारायणगढ-बुटबल सडक
5 मुम्बईमा सुख-दु:खका सारथी, नेपाली कल्लु मामा !